Ugu Aragti Badan
Ugu Faallo Badan Ugu E-mail Badan Kuwa aynu Nahay
Warka ugu Muhiimsan
Shirka iyo Bandhiga Dib-u-dhiska iyo Maal-gashiga Soomaaliya ee Nairobi ayaa la qorsheeyay -- oo loo muddeeyay 28-29-ka Maajo -- ayaa maal-galiyayaasha ku dhiirri-galin doona in ay gacan ka geeystaan dib-u-dhiska Soomaaliya. Diblumaasiyadda
Xiriirka diblumaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal ayaa fowdo galay ka dib xukunkii laba Iiraaniyiin ah oo lagu tuhunsanaa in ay weerarro argaggixiso ka qorshaynayeen Kenya.
Kadib markii muddaaharaadayaashu burburiyeen buundo, oo ay gubeen guyo iyo xafiisyada xisbiga talada haya ee ku yaala Mtwara, ayuu Wasiirka Arimaha Gudaha Emmanuel Nchimbi u sheegay baarlamaanka in ay waajib tahay in tallaabo la qaado.
Wareysi gaar ah oo ay Sabahi la yeelatay, ayuu Afhayeenka Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya Gaashaanle Sare Cali Aden Xumad kaga hadlayaa sida AMISOM ay Soomaalida uga gacan siinayaan nabadda iyo dagganaashaha.
Iyada oo ay soo badanayso is-diiwaan galinta jaamacadaha, ayaa Xiriirka Loo-shaqeeyayaasha Kenya iyo jihooyin kale waxa ay su'aalo ka keeneen in ardayda soo qalin-jabisa ay helayaan tababar ku habboon shaqooyinka.
Iyada oo ay soo kordhayaan shaqaaqooyinka xuduuda, ayaa Gobolka Mandheera uu raadinayaa wada shaqayn ka timaada madaxda iyo hoggaamiyayaasha waddamada Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya.
Xagga Sare Tag